Weather in Thailand tamin'ny March ~ Journey-Assist - vanim-potoana. Hanao inona
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Weather in Thailand tamin'ny volana martsa
Weather in Thailand tamin'ny volana martsa
Tamin'ny fiandohan'ny lohataona, ny tampon'ireo mpamaky fialantsasatra any Thailand dia manomboka mihena tsikelikely. Mihamafana ny andro, indrindra amin'ny herinandro farany amin'ny volana martsa. Raha eo am-piandohan'ny volana dia mety milatsaka orana any amin'ny faritra sasany ao amin'ny firenena, ny tapaky ny volana martsa dia saika mafana sy maina ny faritany manontolo ao amin'ny firenena, afa-tsy ny faritany sy nosy atsimo.
Ny fepetra amin'ny volana martsa
Any amin'ny faritra avaratra, amin'ny faritr'i Chiang Mai sy Chiang Rai, ny mari-pana mandritra ny andro dia mahatratra +34 degre etsy ambony. Ny mampiavaka azy amin'ity faritra ity dia alina somary mangatsiatsiaka, manodidina ny +20 degre. Ny orana amin'izao vanim-potoana izao dia tsy fahita firy.
Tao amin'ny faritra manodidina an'i Bangkok sy Ayutthaya, ny toetrandro dia hahafaly amin'ny andro mafana sy maina miaraka amin'ny hamandoana eo amin'ny 40%. Tena mafana be ny tanànan'ny tanàn-dehibe amin'ny volana martsa, indrindra fa amin'ny mitataovovonana, rehefa manome hafanana ny + 34 ... + 36 degre ny mari-pana. Mafana ny alina any afovoan-tany, farafaharatsiny, +25 degre Celsius. Somary mora kokoa ny mitondra ny hafanana any an-dranomasina. Avy any amin'ny morontsirak'i Pattaya sy amin'ireo nosy akaiky dia mangatsiaka hatramin'ny +31 degre ny rivotra, ary eo amin'ny +29 degre ny mari-dranomasina. Ny rivotra mangatsiatsiaka sy ny maitso tropikaly any amin'ireo nosy dia manalefaka be ny mitatao vovonana amin'ny andro fahavaratra tropikaly.
Tsy mahagaga raha hoy izy ireo fa any Thailandy dia afaka miala sasatra mandritra ny taona ianao fa tsy hahita ilay vanim-potoana "mando". Araka izany, eo amoron-tsiraka any amin'ny Hoalan'i Thailand sy ny nosy Koh Samui amin'ny martsa, ny toetr'andro dia tsara indrindra amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina: ranomasina tony ary tsy mafana ny andro. Amin'ny tolakandro, zara raha mahatratra +30 degre ny mari-pana, ny ranomasina ao amin'ny morontsiraka dia mafana hatrany amin'ny +29 degre. Na eo aza izany toetrandro izany dia aza hadino ny momba ny fomba fiarovana amin'ny masoandro mafana ary aza manahy amin'ny tora-pasika amin'ny mitataovovonana.
Ao amin'ny faritra Andaman Sea, any amin'ny nosy Phuket sy ao amin'ny faritanin'i Krabi, manomboka orana ny volana martsa ary manidina kely ny mari-pana. Amin'ny ambaratonga fohy, avy ny orana mandritra ny fotoana fohy, ary mety ho mikorontana ny ranomasina. Noho ny orana matetika ary ny mari-pana mafana mandritra ny andro, dia ny +32 degre, tsy mora milefitra mora foana amin'ny zokiolona sy ny ankizy ny fitomboan'ny fitomboana. Nahatratra +31 degre ny mari-dranomasina, fa amin'izao fotoana izao dia tsy mahafinaritra ny milomano ao anaty ranomasina: mety misy rahona ny rano noho ny fasika miakatra avy any ambany, afaka mirotsaka ny ranomasina.
Endrika fitsaharana amin'ny volana martsa
Noho ny fiakaran'ny hafanana, somary mihena ny fandehanan'ireo mpizahatany any Thailand. Aorian'io dia mihena ny vidin'ny trano fandraisam-bahiny, indrindra ho an'ny hotely avo lenta miaraka amin'ny kintana 4-5. Nanjary tsy dia sahirana loatra ny fitsidihana ireo vazaha eo an-toerana, misy toerana ampy tsara amin'ireo vondrona mpizahatany ho an'ny rehetra.
Ny toetrandro mahafinaritra amin'ireo nosy any amin'ny Gulin'i Thailand dia mandray anjara amin'ny fetin'ny Kites tsy manam-paharoa, izay amina amin'ny fomba amam-panao amin'ny tanàna kely any Cha-am any amoron-tsiraka. Mandritra ny fetibe dia misy fampisehoana iray - fifaninanana amina am-polony miavaka manidina amin'ny lanitra tsy misy rahona. Mandritra ny fialan-tsasatra izao, ny mpanao asa tanana no mampianatra ny rehetra an'io asa tanana taloha io.
Aiza kokoa ny miala sasatra any Thailand amin'ny volana martsa?
36.0 ° C
1 andro (20.7 mm.)
7 andro (120.4 mm.)
1 andro (25.5 mm.)
5 andro (96.8 mm.)
4 andro (62.8 mm.)
7 andro (120.3 mm.)
37.0 ° C
1 andro (15.3 mm.)
8 andro (113.1 mm.)
7 andro (104.2 mm.)
6 andro (86.6 mm.)
4 andro (62.7 mm.)
6 andro (97.8 mm.)
7 andro (91.1 mm.)
8 andro (106.2 mm.)
5 andro (69.2 mm.)
6 andro (95.1 mm.)
7 andro (94.8 mm.)
8 andro (130.2 mm.)
7 andro (120.2 mm.)
4 andro (64.6 mm.)
6 andro (94.4 mm.)
4 andro (57.5 mm.)
5 andro (95.7 mm.)
6 andro (106.9 mm.)
7 andro (119.0 mm.)
4 andro (57.8 mm.)
5 andro (95.1 mm.)
8 andro (115.2 mm.)
1 andro (17.5 mm.)
4 andro (74.3 mm.)
6 andro (92.7 mm.)
6 andro (72.8 mm.)
1 andro (21.2 mm.)
1 andro (15.7 mm.)
3 andro (46.8 mm.)